Hadiyadaha Ragga Xaaska Leh - Talooyin ku Saabsan Ragga Naqshada Leh | Ragga Stylish
Qaybteena hadiyadaha ragga waxaan ku leenahay xulashada kuwa ugu wax ku oolka ah waana lagu dari karaa qaybta kuwa horey u soo guursaday. Iyagu waa niman jecel inay waqti la qaataan haweenkooda, kuwa aan ilaawin inay tahay inay is daryeelaan, shaki la'aan waxay jecel yihiin tikniyoolajiyadda iyo wixii ka sarreeya inay si fiican u labistaan ​​oo ay la sii wataan baashaalka asxaabtooda.
Doorashada hadiyad loogu talagalay ragga maahan hawl adag haddii aad marwalba dooran karto inaad raadiso mahadnaq waxa ay internetka na siiso. Ma yaraan doono la imid fikrado xariif ah oo aad ka heli karto magaaladaada, ama haddii ay tahay wax ay adag tahay in la helo waxaad had iyo jeer ka dalban kartaa dukaanka internetka.
1 Hadiyadaha ragga guursaday
1.1 Xirmooyinka Cabitaanada Aalkolo
1.2 Daryeel shakhsiyeed
1.3 Qalabka casriga ee ugu dambeeyay
1.4 Qalabka hadda jira
1.5 Getaways laba
Xulashadu waa mid aan la koobi karin laakiin waxaad had iyo jeer ku dooran kartaa fikrad yar oo aad uga dhigtaa mid aad u door badan dhadhanka qofka aad siinaysid:
Xirmooyinka Cabitaanada Aalkolo
Ku dhowaad dhammaan ragga ayaa jecel hadiyadda dhalo gaar ah oo khamri ah ama cabitaan gaar ah. Xulashadayada cabitaannada waxaa ku jira hadiyado aan caadi ahayn, laga bilaabo xirmooyinka illaa laga sameeyo biirka farshaxanka, halkaas oo qofku fursad u helayo inuu ku soo galo adduunka sida dareere dahabiga ah ee aan caadiga ahayn loo samayn karo. Dad badan xirmadan waxay u tahay bar bilow sida wax u noqon karaan wax fudud oo iswaafajin kara adoo isu beddelaya wax gacanta lagu sameeyo.
Haddii waxa aad jeceshahay ay tahay inaad cabto oo aysan aheyn inaad sameyso, waxaa jira uruurino diyaarsan sida kan sawirka ku jira, oo ay la socdaan ilaa 12 nooc oo kala duwan. Iyagu waa India biir nooca Ale, qaab la abuuray hoodo udgoon badan, xoog leh iyo ubax ubaxyo.
Hadiyad kale ayaa noqon karta xirmo lagu sameeyo Gin Tonic. Waxaa loo sameeyay si aad u sameysid Maskaxdaada oo leh waxyaabo tayo sare leh oo aadan ka maqnaan karin 2 dhalo quraarad ah si aad u sameysid qaabab aad u wanaagsan oo leh ilaa 12 xawaash oo kala duwan.
Gadhku waa mid moodada ah oo xirmo gaar ah ayaa hadda la iibinayaa daryeelkaaga. Noocyadan daryeelka gaarka ah waxaan ka helnaa saliid ay ku jiraan maaddooyin saliidaha dabiiciga ah sida yicib, abrikot, canab ama fitamiinno dheeri ah. Sidoo kale kama waayi kartid maqas khaas ah ama burushyo aad ku daryeesho.
hay sanduuqyo gaar ah oo loogu talagalay daryeel gaar ah taasina waa qayb ka mid ah khiyaanooyinka. Waxay ka kooban yihiin xumbo, jare xiirashada, dabada ka soo baxda iyo barafuun, dhammaantoodna waxay leeyihiin uunsi gaar ah oo ragga u gaar ah.
Waxaa jira mashiinno sidoo kale geli kara qorshayaasheena, Iyagu waa timo jareer iyo gadhka loo isticmaali karo xataa biyaha hoostooda. Waad sameyn kartaa ku dhowaad dhammaan noocyada timaha iyo jarista iyada oo ay ugu wacan tahay heerarkeeda kala duwan, dhab ahaantii mashiinka wax lagu jaro ee sidan oo kale ah waa inuusan ka maqnayn daryeelkaaga.
Qalabka casriga ee ugu dambeeyay
Aaladaha nolosha ka dhigi kara kuwo wax ku ool ah oo fudud ayaa ku soo kordhaya waana sababta aan mid u dooranay batteriga moobiilka ee dibedda ah si aad ugu qaadato meeshaad rabto waxaadna dib u buuxin kartaa moobilkaaga markii aad u baahato. Batarigaan wuxuu ku qalabeysan yahay baalayaasha ku shaqeeya cadceedda si markaa iyadoo kaashaneysa iftiinka qoraxda ay markale dib u soo ceshadaan oo ay kaaga badbaadiyaan xaalad deg deg ah
Nalalka habeenkii ee LED-ka oo leh sameecad iyo Bluetooth Waa hadiyad qof walba jecel yahay. Waxaa la dhigi karaa sidii saacad alaarmi ah oo ku xigta miiska sariirta dhinaceeda waxayna leedahay dekedda USB-ga si mobilada dib loogu soo celiyo.
Qalabka hadda jira
Boorsooyinka ka hortagga tuugada ayaa kulul, waxay leeyihiin naqshad iswaafajisa dhammaan noocyada dharka oo waxaa loogu talagalay qaab is haysta. Gebi ahaanba waa ammaan si aan waxba looga xadin karin gudaha, jiinyeerkiisu waa qarsoon yahay gudahana waxay leedahay dhammaan noocyada kala duwan ee lagu qaado tiknoolajiyada ee lala xiriiri karo bannaanka nooc ka mid ah bixitaanka.
Maaskarada ilaalinta way innaga dhow yihiin weligood, waxaanan ka heli karnaa qaar ka mid ah dukaamada internetka oo leh naqshad gaar ah, si ay u noqdaan kuwo xarrago leh Qaar sidan oo kale ah Waxay leeyihiin daaweynta ViralOff® ee baabi'isa 99% fayras kasta doonaya inay ku ekaadaan dusha sare oo iyaguna waa la dhaqi karaa. Waxay la yimaadaan kiis naqshadeeye si markaa dib loogu celin karo markii aan la isticmaalin waxayna gaar u yihiin hadiyad.
Noocyada khibradaha noocan ah ayaa loogu talagalay inay ku siiya damacaas kaligiis ama la socda. Taasi waa sababta aysan u jirin xulasho ka wanaagsan in la qaato xirmo oo la siiyo nin si uu naftiisa u siiyo waxa uu doonayo.
Waxaa jira seddex maalmood oo firaaqo iyo nasasho ah, si loogu kala baxo laba maalmood oo jimicsi jacayl ah, seddex maalmood oo ah baxsi soo jiidasho leh ... Haddii ninkaasi guursaday oo aabe yahay, waxaa sidoo kale jira xirmooyinka waalidiinta ugu fiican ama lamaanayaasha aadka u faraxsan, oo leh caloosha ugu fiican, aagagga raaxada iyo nooc ka mid ah waayo-aragnimada dalxiiska ee aan la ilaawi karin.
Waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan hadiyadaha maqaalladayada gaarka ah ee ragga: Tilmaamaha la bixinayo xilliga Kirismaska, 5 fikradaha hadiyadaha ee waalidiinta o hadiyado loogu talagalay ragga dhalinyarada ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Hadiyadaha ragga guursaday